चार अर्ब ३५ करोडको तरकारी विक्री | गृहपृष्ठ
Home समाचार चार अर्ब ३५ करोडको तरकारी विक्री
चार अर्ब ३५ करोडको तरकारी विक्री
मङ्सिर १४, धनकुटा । बाह्रै महीना तरकारी उत्पादन हुने धनकुटामा रू. चार अर्ब ३५ करोड बराबरको तरकारी विक्री भएको छ । सिँचाइको सुविधा भएका क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै तरकारी उत्पादन र विक्री बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ ।
यस वर्ष जिल्लामा उत्पादित बन्दागोभी, मूला, आलु, गोलभेँडा, अकबरे खुर्सानी, घीउसिमीलगायत तरकारी उत्पादन भएको छ । जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब रू.३० करोड बढीको तरकारी उत्पादन विक्री भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यलयका प्रमुख भरत विडारीले जानकारी दिए ।
बजारको समस्या नभएको र गत वर्षको तुलनामा तरकारी खेतीमा किसानको सङ्ख्या थपिनु एवम् तरकारी उत्पादन गर्ने जमिनको क्षेत्रसमेत विस्तार भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ ।
बाह्रै महीना तरकारी उत्पादन हुने जिल्लामा गत वर्ष सबैभन्दा बढी रू. एक अर्ब २९ लाख ५५ हजार बराबरको गोलभेँडा उत्पादन भएको थियो । कूल एक हजार ४ सय ५८ हेक्टरमा ५१ हजार ९ सय ७८ मेट्रिक टन गोलभेँडा उत्पादन भएको थियो । बाँझिएको जग्गासमेत प्रयोगमा आउन थालेको विडारीले बताए ।
जग्गा भाडामा समेत लिएर किसानले खेती गर्न थालेका जोरपाटी गाउँपालिकाका मेघराज खतिवडाले बताए । जिल्लामा उत्पादित तरकारी सुनसरीको धरान, मोरङको विराटनगर, झापाको विभिन्न बजार तथा भारतमा लगेर समेत विक्री गरिँदै आएको छ । जिल्लामा ४० हजार ८ सय २३ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य छ । रासस